 » ကြှနျုပျတို့အကွောငျး » Media Coverage
ဇူလိုင်လတွင် 21, သတင်းထောက်သည် Shaanxi Zhongbei Titanium Tantalum Niobium Metal Materials Co သို့ရောက်လာသည်.
ငွေရောင်အချောထည်ပစ္စည်းများသည်သတ္တုတောက်တောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အချို့မှာပြွန်ဝိုင်းများဖြစ်သည်, အချို့မှာစတုဂံအပိုင်းအစများဖြစ်သည်. “၎င်းသည် Apple ဆဲလ်ဖုန်း display တွင်သုံးသောကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်?”သတင်းထောက်ရဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့မျက်နှာမှာ, မစ္စတာ. Qi Baoming, လုပ်ငန်း၏တာဝန်ခံ, ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သောကုန်ချောထုတ်ကုန်များသည်သံမခဲသတ္တုများနှင့်ရှားပါးသောသတ္တုများကိုအပေါ်ယံပစ်မှတ်များအဖြစ်စီမံထားသည်, display screen coating အတွက်ကုန်ကြမ်းများဖြစ်သော. “ကုန်ကြမ်းများကိုအခြားထုတ်လုပ်သူများအားပေးအပ်သည်, သူတို့သည်ကိရိယာများမှတဆင့်ကုန်ကြမ်းများကိုအငွေ့ပျံစေသည်, ဖန်သားမျက်နှာပြင်ကိုညီညာစွာဖြန်းကာအပေါ်ယံအားဖြည့်ပါ, အပေါ်ယံအလွှာနှင့်, မှန်သည်ပုံကိုပြနိုင်သည်။”မစ္စတာ. Qi Baoming ကပြောသည်.
ကုန်ကြမ်းများကိုအရည်အသွေးပြည့်ဝသောအပေါ်ယံပိုင်းပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ, ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, သတ္တု၏အချိုးအစားသည်မှန်ရန်လိုသည်, gasification ကိုဒဏ်ငွေနှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်စေသောသတ္ထုမှုန်များဖွဲ့စည်းသည်. ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း, သတ္တုများစွာကိုအပြည့်အဝပေါင်းစပ်ရန်, အပူချိန်သည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်, ပူလွန်းအေးလွန်းလို့မရဘူး, အနည်းငယ်ဆိုးဝါးသောထိန်းချုပ်မှုသည်နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်, ကုန်ချောထုတ်ကုန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, display နှင့်မော်တော်ကားမှန်ပေါ်တွင်လျှောက်လွှာ, ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ, ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုအမျိုးအစားလိုအပ်သည်, အချိုး, အပူချိန်နှင့်နည်းပညာသည်လည်းကွဲပြားသည်. ဒီအတွက်ကြောင့်, လုပ်ငန်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစမ်းသပ်မှုများအတွက်အချိန်အများကြီးမပေးချေ, အထူးသဖြင့် Apple ဆဲလ်ဖုန်း display အတွက်ကုန်ကြမ်းများထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်, လိုအပ်ချက်များသည်ပိုမိုတင်းကြပ်လာသည်, သူတို့သည်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အချိန်ပိုဆက်တိုက်လုပ်လေ့ရှိသည်, ပိတ်ရက်တွေတောင်မအနားယူဘူး, ထက်ပိုတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းများဖြုန်းတီးရုံသာ 100,000 ယွမ်.
မစ္စတာ. Qi Baoming က၎င်းလုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ နည်းပညာသည်တဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားကြောင်းသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည် 2017, tantalum ၏ sputtering နှင့် vacuum coating ကိုအဓိကအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်, niobium, zirconium, ဟက်ဖ်နီယမ်, ဗန်နီယမ်, နီကယ်, တိုက်တေနီယမ်နှင့်သတ္တုမျိုးစုံ, ထုတ်ကုန်များကို display screen ကဲ့သို့စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်သုံးသည်, ကင်မရာများ, သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း, ကြွေထည်ပစ္စည်းများ, ဖန်ခွက်ကြီး, auto အစိတ်အပိုင်းများနှင့် photoelectricity. “ကျွန်ုပ်တို့၏ခွန်အားကိုမြှင့်တင်ရန်, ငါတို့သည်လည်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်, ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးကတည်းက, ငါတို့မှာအသုံးဝင်တဲ့နည်းပညာမူပိုင်ခွင့်နည်းပညာခုနစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။” Qi Baoming ကမိတ်ဆက်သည်, “မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော niobium rotary ပစ်မှတ်” မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာသည်၎င်းတို့၏အရေးအပါဆုံးနည်းပညာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်လေးနှစ်နီးပါး. ဒီနည်းပညာကိုဖန်သားအပေါ်ယံပိုင်းအတွက်အဓိကသုံးတယ်ဆိုတာသတင်းထောက်သိလာတယ်, ယခင်နည်းပညာအတိုင်း, coating သည်ပိုကြီးသောသတ္တုမှုန်များထုတ်လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, ဖန်တွင်းကိုလုပ်လိမ့်မည်, သို့မှသာထုတ်ကုန်အားလုံးဖျက်ပစ်လိမ့်မည်. ဤနည်းပညာကိုအသုံးချပြီးနောက်, sputtering သည် ပို၍ တူညီပြီးအချောထည်ထုတ်ကုန်နှုန်းသည်မြင့်တက်လာသည် 20%.
Shaanxi Zhongbei Titanium-Tantalum-Niobium Metal Materials Co., Ltd မှ. ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမာခံနည်းပညာနှင့်ရိုးသားသောစီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတရားတို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်, အမြဲမပြတ်ကုန်ပစ္စည်းအော်ဒါများနှင့်သုံးစွဲသူများထံမှအပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြင့်. ယခုနှစ်ပထမလေးလပတ်အတွင်းသတင်းများအရသိရသည်, လုပ်ငန်းသည်အော်ဒါတစ်ရာကျော်လက်ခံရရှိပြီးရောင်း ၀ ယ်မှုပမာဏထက်ပိုမိုရောက်ရှိခဲ့သည် 18 သန်း.